Tijaabada Imtixaanaadka Koofurta Kuuriya Oo Hadafkeedu Yahay Xaqiijinta ATSC 3.0 Moodooyinka Adeeg | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » Tijaabada Imtixaanka Koonfurta Kuuriyada Koonfureed ayaa looga gol leeyahay xaqiijinta ATSC 3.0 Models service
Maamulaha isgaarsiinta RAPA Jay Kangok Jeon ayaa sheegay in tijaabadooda cusub ee ATSC 3.0 ay u furan tahay dhamaan wariyaasha, iibiyaasha iyo ururada.
Tijaabada Imtixaanka Koonfurta Kuuriyada Koonfureed ayaa looga gol leeyahay xaqiijinta ATSC 3.0 Models service
SEOUL — Janaayo 14, 2020: In kasta oo 15 milyan oo dalxiisayaal ah ay booqan karaan Jasiiradda Jeju oo ku taal geeska koonfureed ee Kuuriyada Woqooyi si ay u waajahaan waxa codbixinta caalamiga ah ee 2011 loogu aqoonsaday mid ka mid ah 'New Seven Wonder of Nature', Ururka Kor u qaadista Raadiyaha Korea (RAPA) qorshihiisa waa weyn ee jasiiradda: soo jiidashada TV-yada ugu weyn adduunka ee telefishannada.
Laga bilaabo 2020, waxaan ku shaqeyn doonnaa ATSC 3.0 tijaabin sidii iskaashi dowladeed iyo mid gaar ahaaneed waxaanna ku casuumi doonnaa kuwa ku jira qaab-dhismeedka 3.0 -kastoo aad tahay idaacad, telefon, adeeg-bixiye elektiroonig ah ama iibiyaha qalabka baahinta — si aan uga qeyb-qaadno tijaabooyinka Next Gen TV. adeegyo ka socda tas-hiilaadkii aan ka aasaasnay ​​Jasiiradda Jeju, ”ayuu yiri maamulaha isgaarsiinta RAPA Jay Kangok Jeon.
Maamulaha isgaarsiinta RAPA Jay Kangok Jeon
Ilaa hadda, ururku wuxuu qaaday dhowr tillaabooyin muhiim ah oo lagu aasaasayo tijaabada dhiigga. Waxay ku guuleysatay oggolaanshaha shatiga tijaabada ee Komishanka Isgaarsiinta Kuuriyada inay u oggolaato tijaabada socota, waxay heshay marin-hayeyaasha xiga ee Telefishanka iyo aaladda kale ee RF ee tijaabooyinka, oo laga duubay qaar ka mid ah shabakadaha isku-xirka halista ah (SFN) iyadoo ujeedku yahay samaynta kuwa kale iyo xitaa hubiyay tiro kala duwan oo ah macaamiisha 3.0 qaata, ayuu yidhi Jeon.
Waxaan rabnaa inaan bixinno tas-hiilaad si ay awood ugu yeelato qiimeynta moodooyinka adeegga mustaqbalka ku-habboon ee la tijaabin karo lana xaqiijin karo, ”ayuu yiri Jeon.
Tijaabinta noocaan ah ee adeega noocaan ah waa aasaaska u raadinta warbaahinada warbaahintu u baahan yihiin inay gaaraan go'aano xog ogaal ah oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee looga faa iideysan karo fursadaha cusub ee 3.0 awood u siinaya.
“Waxaa laga yaabaa inaad ka fiirsato inaad u guurto adeegga ATSC 3.0,” ayuu yidhi Jeon. Laakiin ka hor intaadan taas samayn, tallaabadaada ugu horreysa waa inay ahaato inaad go’aamiso nooca nooc adeeg ee aad rabto inaad siiso macaamilka. Waxay la mid tahay qorshahaaga ganacsi. ”
Tusaale ahaan, war-baahin laga yaabo inuu ku deeqo waxyaabo shaqsi ahaaneed, oo ay kujirto xayeysiinta, daawadayaasha loo soo maro ATSC 3.0. Si kastaba ha noqotee, kahor intaan la maalgelin waqtiga, maalgelinta iyo shaqaalaha si taasi u dhacdo, wariyayaashu waxay rabi doonaan inay hubiyaan in awooddan cusub ee 3.0 ay dhab ahaantii shaqeyneyso. Si taas loo sameeyo, tijaabada cusub ee Jeju Island ma aha oo kaliya waxay awood u yeeli doontaa tijaabada tikniyoolajiyadda la heli karo si loo go'aamiyo kan sida ugu fiican u shaqeynaya, laakiin sidoo kale waxay soo aruurin doontaa xog ku saabsan sida macaamiisha wax u qabtaan.
Waxaan la wadaagi karnaa dhammaan macluumaadka - dabeecadda goobjoogaha iyo falcelintooda. Wax walba. Xaqiiqdii, iskaashiga RAPA ee tijaabooyinkaan waxay ka dhigan tahay inaad heshid dhammaan warbixinada imtixaanka ee ku saabsan waxa ka socda teknolojiyaddan cusub iyo fursadda lagu beddelayo fikradaha iyo xogta, ayuu yidhi Jeon.
Beerta 'ATSC 3.0 Theme Park'
Bishii Nofeembar 2019, Jeon wuxuu muujiyey aragtida tijaabadan Jeju Island, oo uu ugu magac daray "ATSC 3.0 Theme Park," inta lagu gudajiray NAB-RAPA Workshop, ATSC 3.0 Seminar Seminaar oo ka dhacay Hotelka Kimpton Hotel ee Palomar ee Phoenix. Jeon wuxuu shaaca ka qaaday kulanka in ururo badan oo kaladuwan ay kaqeybgaleen tijaabada, bixiyeyaasha adeegga isgaarsiinta mobilada, seddex telefishan oo telefishan ah, shirkadaha macaamiisha elektarooniga ah iyo Machadka Cilmi baarista Isgaarsiinta Koonfurta (ETRI), tan iyo markii la wareejiyay 18 bilood ka hor.
Sidii markii horeba la geeyay, qalcaddii laga helay qaybta waqooyi-bari ee jasiiradda ayaa soo bandhigtay saddex xarumood oo SFN ah oo la isugu gudbiyo; si kastaba ha noqotee, laba kale ayaa loo qorsheeyay in kor loogu qaado caymiska, ayuu yidhi.
Kuuriyada Koonfureed waxay taariikh u leedahay kaalin hoggaamineed ee Next Gen TV. Bishii Meey 2017, baahinta caadiga ah ee hawada ka soo baxda ee 3.0 ayaa ka bilaabatay Seoul. Kadib bishii Febraayo 2018, wariyaasha ku sugan Jasiiradda ayaa adeegsaday 3.0 si ay ugu gudbiyaan UHD caymiska ciyaaraha Olimbikada Xilliga Jiilaalka 'LG iyo Samsung qaata'. RAPA waxay sidoo kale qaadatay fursad ay ku muujiso soo dhaweynta UHD mobilada qaaska ah ee sida khaaska ah u labisan oo basaska raacaya goobta Gangneung Olympic Park goobta. Marka xigta, xagaaga xagaaga 2018, KBS, MBC iyo SBS ayaa gudbiyay wax ka badan 2018 saacadood oo ah 130K UHD oo leh HDR iyada oo loo marayo ATSC 4.
“Hadaad tahay idale - ka mid ah idaacadaha Mareykanka, tusaale ahaan — waa lagugu soo dhaweynayaa. Haddii aad tahay shirkad macaamiisha korontada ku shaqeysa, xitaa midda aan aheyn shirkadda Kuuriyada, taasi waa hagaagsan tahay. Haddii aad tahay soo-saare tikniyoolajiyadeed oo aan asal ahaan ka soo jeedin Kuuriya, xarunta ayaa kuu furan adiga - shuruudo gaar ah maxaa yeelay tani waa mid dowladeed lagu maalgeliyo. Haddii aad ku lug leedahay R&D aan ganacsi ahayn oo aad rabto inaad tijaabiso oo aad xaqiijiso tikniyoolajiyadda, waxaan rabnaa inaad isticmaasho xaruntan, ”ayuu yidhi Jeon.
Ujeeddada RAPA waa mid fudud: in la siiyo ATSC 3.0 daneeyayaasha heer caalami, furitaan tijaabo ah oo muujinaya moodooyinka adeegga Next TV, tijaabinta is dhex galka qalabka 3.0 ee ka mid ah iibiyaasha, waxay soo bandhigayaan baarayaasha 3.0 meel meel ay ku hubiyaan shaqadooda guud ahaanna waxay ka caawiyaan gebi ahaanba deegaanka deegaanka 3.0. tilmaami maahan oo keliya waxa jaangooyuhu u awood leeyahay maanta laakiin sidoo kale waxa ay awood u yeelan karto mustaqbalka fog, ayuu yidhi.
Jasiiradda Jeju way ka duwan tahay goobaha kale ee tijaabada laga qaado, ”ayuu yidhi Jeon. Waxaan rabnaa inaan sahamino oo tusno moodello adeeg oo aan la sii deyn. Tusaale ahaan, waxaan rabnaa inaan isku dayno 3.0G iyo ATSC 5 adeegga 'hybrid'.
Ma jirto wax lacag ah oo lagaa qaadayo isticmaalidda Jeelka Jasiiradda. Si kastaba ha noqotee, kuwa raadinaya inay ka faa'iideystaan ​​tas-hiilaadka waa inay bixiyaan duullimaadyadooda u gaarka ah jasiiradda sidoo kalena ay diyaarsadaan qalab kasta oo warbaahin ah oo loo baahan karo oo aan ahayn qalabka gudbinta ee hadda jira, ayuu yidhi.
Jeju Island testbed wuxuu u furi doonaa siiyayaasha tikniyoolajiyadda teknolojiyadda laga keeno waddan kasta. Intaa waxaa sii dheer, shirkadaha ka qeyb qaadanaya Kuuriyada Koofureed, oo ay ku jiraan ATBiS, Digicap, Maru ENG, Aircode, DS Broadcast, Agos, Kai Media, CleverLogic iyo Lowasis waxay awoodi doonaan inay bixiyaan caawinaad farsamo. Qalabka ATSC 3.0 ee shirkad kasta waxay leedahay rikoor la xaqiijiyey, iyadoo si buuxda loogu tijaabiyay suuqa warbaahinta South Korea.
In kasta oo RAPA ay dejisay himilooyin hamig ah himilada Jeju, Jeon wuxuu ku kalsoon yahay in lagu guuleysan karo. Waxaan rabaa in aan ka sameeyo jasiiradda Jeju Island xarun muujineysa adduunka gebi ahaanba noocyada adeegga, ”ayuu yiri.
Waxaan isku dayeynaa inaan sameyno dhammaan tijaabadan iyo xaqiijinta adduunka marka hore. Meel kale lagama qaban adduunka. Waxaan rabnaa inaan ku hogaamino tijaabada iyo xaqiijinta adeegyada TV-yada ee Next.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Jee Island Island testled email Jay Kangok Jeon at [Email ilaaliyo]
Fariimaha ugu dambeeyay ee uu qoray Josh Gordon (arki dhan)
Tijaabada Imtixaanka Koonfurta Kuuriyada Koonfureed ayaa looga gol leeyahay xaqiijinta ATSC 3.0 Models service - January 12, 2020
Kuuriyada Koonfureed waxay soo bandhigaysaa adeegga ugu horreeya ee adduunka ee ATSC 3.0 adeegga heeganka - September 28, 2019
Xogta Aragti-socodka ah ee Iris 1.0, oo ah xawaalad shaqo-ku-salaysan oo ku salaysan fayl-gareeye oo ka gudubtay lix dhibcood oo dib-u-dhac - July 24, 2015
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Caaqilada Cobalt Graham Chapman Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, dhimista buuqa, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, hoos bitrate, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw SoftAtHome, MStar, CES2017 Ultra HD Forum Video Engineer	2020-01-12
Previous: Abaalmarinta NAB Crystal Radio Abaalmarinta 2020 NAB Show
Next: Naqshadeeyayaasha Soo Saarashada / Sawirka